Soo-rogaal-celinta Soomaliyeed, Isbedelka Geeska Afrika & Umadda Soomaaliyeed. Riyadii (AUN) Dr. Cumar Cusmaan Raabe
Tuesday 4th December 2018 10:05:46 in Aragtida Dadweynaha by Xafiiska Burco
Qoraalkan waxaan kusoo qaadanaynaa Xulashada Maanta & Isbedelka Geeska africa
waxaan jeclaaday inaan la wadaago qayb qayb riyadii filasoofka dr omer oamaan raabe dhamaan umadda Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan . muxuu ka yidhi :- Qoraalkan waa dardaaran uu ka tegey Dr. Cumar Cusmaan Raabeh Allah ha u naxariistee, waxaanan Soo qaadanaynaa In Umadda Soomaaliyeed uu uga tagay inay Ka faa'iidaystaan Riyadii Dr Raabe , umadda soomaaliyeedna maanta ay gaadhay .
Waa kan qoraalkii...
I.(1) Haddii Qaranka Soomaliyeed la waayo , Qayb ka haraysaa ma jirto wixii "shanta Soomaliyeed” la oran jiray”. Haddi qaranka Soomaliyeed la waayo
qolla haraysa ma jirto. Haddii Qaranka
Soomaaliyeed la waayo qoys harayaa ma jiro. Haddii qaranka Soomaliyeed la waayo qof Soomaliyeed oo haraya ma jiro… Idiinkuba ma aragtaan, Soomaliyey, lug sii socota oo la leeyahay "jirkii dhintay ee la aasay bay ka nooshahay”!!!?? … amase laan wayn oo cagaar ah oo la leeyahay "geedkii la gooyey ee la gubay bay ka nooshahay, ka roontahay, ka madaxbannaan tahay”!?!?… Waa wax aan maangal ahayn, aan la garawsan karin, dad intii waalan iyo wax sabi ah uun loo sawiri karo…
2. a) Qabaailku waa laamaha geedka qaranka. Innbaa laga dhaadhiciyey, cadawgu dhacsiiyey : In laanta qabiilkoodu ay sii jiri doonto haddii
geedka laftiisaba la jaro, oo xididka loo saaro, oo ay ka maarmi doonto, kana raysan doonto!!…
b) Gobolku wuxuu ka mid yahay, ku yaallaa qaybna ka yahay dalka Soomaaliyeed oo ah jidhka, oogada Qaranka Soomaaliyeed. Qarankuna waa sidii qof xubno iyo waxo leh, caqli iyo aqoon leh, xusuus iyo xikmad leh,
taariikh iyo mustaqbal leh, himilo iyo dareen, naf iyo iraado intaba leh.
Qaar baa u haysta haddii "qof-qarameed”-ka ba qudhu ka baxdo, oo uu dhinto, in "gacanta” amase "lugta” ay sheeganayaan ay u harayso oo
ay haysanayaan; garaaddarradaas buurta leegina ay barbar marto.
Hase yeeshe, haddaan isha oo kale tusale u soo qaadanno: Ishu wax ma arkooto, waxna iskama aragto gudaheeda: waxay il u tahay, il ka tahay,
il ku tahay, waxna ku aragtaa jirka nool ee ay ku taallo, ka mid tahay, hawl gaar ah oo loo abuurayna ay u hayso, hawshaas awgeedna ayey ku nooshahay. Hadday isa soo tuurto, oo ay bannaanka isa soo dhigto nolol, qurux iyo nuur midna yeelan mayso.
Bakhti iyo baaba’ uunbaa u dambeeya…
3) Isu-tagga xubnaha iyo wada-shaqayntooda bay ku jiraan nolosha guud iyo wanaagga jirku. Sido
kalena marba marka, guud ahaan, jirku uu sii fiicnaado bay gidigood iyo gaar ahaan mid walba ay sii doogsadaan.
Wada shaqaynta xubin walbi ay la shaqaynayso xubnaha kale oo dhan, kuna midaysan yihiin kulligood ujeedada guud ee ah in jirka, gebi ahaantiis (tin & cirib), uu ku noolaado caafimaad, nabadgelyo iyo barwaaqo lagu waaro,
ayuu ku jiraa wanaagga jirka ee kama danbaynta ah iyo ka xubnaha oo dhan, iyo mid kasta oo ka mid ah gaar ahaanteed. Hadduu wanaagsan yahay way la qabaan. Haddii xubin wax gaaraan wuu ka xanuunsanayaa oo
xubnaha kale oo dhan baa daafacaya.
Dhimashadiisuna waa kala-baxooda iyo
baaba’ooda… Sidaas awgeed, kuwa dadka ugu baaqaya waa Siyaasiinta maamul goboleedyada'e in la
kala diro qaybaha iyo waaxyaha dawladda iyo qaranka Soomaaliyeed.
Waa saddex nooc midkood: -
(a) Maskax-digaagle caami ah oo waxa socda aan waxba ka ogayn, wuxuu yaqannana uu ku kooban yahay magac qabiil oo kiisa ah…
(b) Mujrim kas iyo maan dadka u khaldaya oo nolosha iyo sharafta Ummadda dhaafsanaya dana
yaar oo gaar ah.
(c) Dameer calooshii u shaqayste ah oo
nolomalmeed ugu adeega cadawga, oo u rarto. Kuwaas oo mudan ciqaab kama-danbayn ah, maxaa wacay waa dhagar-qabayaal qaran!…
Qormooyinkani waa kuwa si toosa u turjumaaya Isbedelka Geeska africa waan idinla wadaagi doonaa Asxaabta isha allah .
1. Waajibka ugu wayn ee manta saran qof kasta oo soomaliyeed meel uu jooga ba, waa badbaadada Jamhuuriyadda soomaliyeed, isagoon waxba ka hagran awood wuxuu Alla ku mannaystey!…
3. Waddaniyiintu,meelay joogaan ba
NB. ""Soomaaliyeey Bishaaro , 100% waad isjeclaan doontaan wixii idin soomarayna riyo riyo ayey noqondoontaa Bi'idmillahi"" , Hadalkii Dr Omer Osman Rabeh )